February 10, 2018 – PuraKhabar
राशिफल मिति 2074-10-28 गते आइतवार
मेष– आफ्नो वर्गको नेतृत्व गर्दै प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने अवसर जुट्नेछ । कीर्तिमानी काम सम्पादन गर्न सकिनेछ । वृष– आज साथीभाइहरुबाट फाइदा उठाउन सकिएला । उच्च महत्वाकांक्षाले गर्दा सोचेको काम पूर्ण रुपमा सम्पादन हुनेछन । मिथुन– खर्च बढ्ने र आर्थिक अभावले सताउने योग छ । तर पनि विपरीत लिंगी वा केही हितैसी मित्रहरूले साथ दिनेछन् । कर्कट– आज तपाइलाई विशेष पदमा बसेका वा राजनीतिक व्यक्तित्वबाट धोका हुन सक्छ, खानपानमा पनि एकदमै सजक रहनु होला । सिंह– लुगा, भोजन र विशेष उपहार हातलागी हुनेछन् । भोगविलासमा मन रमाउनेछ । कृषि व्यवसाय…
हङकङ: चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङमा शनिबार भएको बस दुर्घटनामा कम्तिमा १८ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । शाटिनबाट ताईपोतर्फ हिँडेको बस ताइपोमा पुगेपछि भएको दुर्घटनामा १५ जना पुरुष तथा तीन महिलाको घटनास्थलमा नै निधन भएको बताइएको छ । उद्धारकर्मीले दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त बसको माथिल्लो भाग काटेर बसमा फसेका अन्य यात्रुलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल पठाएका छन् । घानाको अनुसन्धान शुरु गरिएको छ । घाइतेलाई भेट्न हङकङका कार्यकारी प्रमुख लाम चेङ युएट ङोरले विरामीहरूलाई उपचार सेवा दिइराखिएको प्रिन्स अफ वेल्स अस्पताल जानुभएको बताइएको छ ।
पोखरा, कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ११, छुमरुङ नजिकै सिन्ह्वामा एक विदेशी महिला मृतावस्थामा फेला परेकी छन् । अन्नपूर्ण बेसक्याम्पबाट फर्कने क्रममा माघ २६ गते सिन्ह्वा गेष्ट हाउसको कोठा नं ३ मा बास बसेकी राहदानी नं १७ एटी ९०६०२ की फ्रान्सेली नागरिक ३२ वर्षीय लाउरी मारा युटी टिजानकोभ नेडेव आज बिहान मृतावस्थामा फेला परेको ४ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले जनाएको छ । थप अनुसन्धानका लागि शव फिस्टेलको हेलिकप्टरबाट आजै काठमाडौँ पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार बस्यालले जानकारी दिनुभयो । -रासस
मार्चभित्र नेपाल क्रिकेट संघमा नयाँ नेतृत्व
काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को बोर्डले आगामी मार्चभित्र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्ने निर्णय पारित गरेको छ । शनिबार सम्पन्न बोर्ड बैठकले सल्लाहकार समूहले तयार पारेको विधानमा पछिल्लो सहमतिअनुसार गरिएको परिमार्जनलाई मार्चभित्रै क्यानको निर्वाचित समितिको विशेष साधारणसभाले पारित गरिसक्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आईसीसीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सहमति र परिमार्जन गरिएको विधानलाई पारित गर्न आगामी मार्चभित्र क्यानको निर्वाचित समितिको विशेष साधारणसभा आयोजना गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार मार्चको अन्त्यसम्म जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने निर्णय आईसीसी बोर्डलाई…
अमेरिकाको सिएटलबाट एंकोरेजका लागि उडेको एउटा जहाज पुनः एंकोरेज विमानस्थलमै फिर्ता हुन बाध्य भएको छ । मध्य आकाशमा उडिरहेको अलास्का एयरलाइन्सको जहाजभित्र एकजना यात्रुले नांगिएर तमासा गरेपछि जहाजलाई उडान भरेकै विमानस्थलमा फिर्ता गर्नुपरेको हो ।समाचार अनुसार जहाजभित्र रहेको एकजना यात्रु जहाजको बाथरुममा छिरेर जिउका सबै कपडा फुकालेर तमासा गर्न थालेका थिए । एयर होस्टेजहरुले ती यात्रुलाई कपडा लगाएर आफ्नो सिटमा गएर बस्नका लागि बारम्बार आग्रह गरेपनि उनले अस्विकार गरी नांगै उफ्रिन थाले । त्यसपछि जहाजको पाइलटलाई उक्त परिस्थितिको जानकारी गराइयो । पाइलटले उक्त घटनापछि जहाजलाई सिएटल लग्नुको साटो फर्काएर एंकोरेज…
नबिन के.सी अर्घाखाँची। जिल्लाको मालारानी गाँउपालिकामा गैरकानुनी रुपमा आठ महिनाको गर्भ पतन गरि शिशुको हत्या गरेको रहस्य खलुको छ । यसरी शिसुको हत्या गरेको आरोपमा आमा र एक मेडिकल सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गर्भपतन गराउने प्यूठान गौमुखी गाउँपालिका–५ की ४१ महिला र सिरहा सिसवानी घर भइ हाल अर्घाखाँची मालारानीको हंसपुरमा मेडिकल सञ्चालन गरी बस्ने ५६ वर्षीय लखन यादवलाई पक्राउ गरेको हो । मालारानी गाँउपालिकाको वडा नं ६ हंसपुरको लोहोरीमा गर्भमा ८ महिना पुगिसकेको शिशुको असुक्षित गर्भपतन गरी हत्या गरेको आरोपमा आमा र मेडिकल सञ्चालकलाई प्रकाउ गरिएको जिल्ला प्रहरी…
अचम्मको देश जहा बजारमा पैसा तौलेर बेचिन्छ (फोटो फिचर)
के तपाईले पैसाको नोटको बजार देख्नुभएको छ? सायद छैन होला । किनकि हामीहरुलाई पैसाको केही नोट देख्न पनि कत्ति मिहेनत गर्नुपर्नेहुन्छ । तर एउटा यस्तो ठाउँ पनि रहको छ,जहाँ नोटको बजार नै राखिएको छ । यो कुनै बनावटी कुरा होइन, यो साँचो कुरा हो । तपाईहरुलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर एक अफ्रिकी देश सोमालिल्याण्डमा नोटको बन्डल बिक्री हुने गर्दछ । जहाँ किलोका हिसाबले तौलेर नोट बेचिने गरिन्छ । सन् १९९१ मा सोमालियाबाट अलग्गिएर एउटा नयाँ देश बनेको थियो सोमालिल्याण्ड । यस देशलाई हालसम्म कुनै पनि राष्ट्ले अन्तराष्ट्यि रुपमा मान्यता दिएको…
चितवन पुगेर प्रचण्डले पटक–पटक किन सम्झिए गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ?
भरतपुर– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनताको हितका लागि जस्तोसुकै भूमिका खेल्न समेत तयार रहेको बताएका छन् । चितवनको भरतपुरस्थित तीनखोले महाबौद्ध गुम्बाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीति संकटबाट देशलाई निकास दिन मियोका रुपमा भूमिका खेल्दै आएको बताएका हुन् । राजनीतिमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले देश संकटमा परेको बेला विगतमा र अहिले पनि आफूले सबै समूह, शक्तिबीचको तिक्तता र विवादलाई साम्य गरी निकासतर्फ अघि बढाउने भूमिका खेलेको बताए । म अहिले जुन किसिमले हिँडेको छु, यसबाट देश र…
सामाजिक सुरक्षाको विषय अन्तत: आम नागरिकको गम्भीर चर्चाको विषय बनेको छ। केही दिन अघि सरकारले जेष्ठ नागरिकले भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ७० वर्षबाट ६५ बनाउने लगायतका निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयसँगै सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा बहसमा आएको छ। यी निर्णयहरू गर्नुहुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो ? अहिले गर्न मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो? दिगो आर्थिक विकास र स्रोतको सुनिश्चितता विना यस्तो भत्ता संभाव होला? के सामाजिक सुरक्षा भनेको नगद हस्तान्तरण मात्रै हो? सरकारका नीतिले वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ कि उत्पादनलाई? यी सबै महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्। यी प्रश्नमा कांग्रेसभित्र र बाहिर फरक-फरक धारणा अाएका छन्। एमालेले पार्टीभित्र पनि…
बुटवलका पत्रकार भट्टराईलाई पितृशोक
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ रुपेन्देहीका पुर्व उपाध्यक्ष तथा तिलोत्तमा दैनिकका सम्पादक खिमानन्द भट्टराईलाई पितृ शोक परेको छ । उहाँका पिता ९० बर्षीय मित्रलाल भट्टराईको आज आईतबार विहान ७ बजे निधन भएको परिवारजनले बताएका छन् । गत शनिबार देखि काठमाडौस्थीत बिरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचार गराईरहनु भएका भट्टराइको श्वास प्रश्वासमा समस्या थियो । गुल्मीको लिम्घा ६ घर भई हाल काठमाण्डौको नार्गाजुन नगरपालीका ४ सितापाइलामा उहाँ बस्दै आउनु भएको थियो । स्वर्गिय भट्टराईका ३ छोरा र दुई श्रीमती हुनुहुन्छ । उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तीम संस्कार गरिएको छ । काँग्रेसका पुराना…